Ukubukezwa Kwemvelo - Ithuluzi leWebhu eliphumelelayo le-Scraping
I-Web scraping inqubo enokwethenjelwa futhi ethandwa kakhulu kokuseshwa kwewebhu kanye nezinkampani zama ukususa ulwazi oluningi ku-intanethi kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene kuwo wonke ama-intanethi. Namuhla umthombo ovelele kakhulu wolwazi yi-intanethi, futhi abasebenzisi abaningi bewebhu basebenzise nsuku zonke. I-Python iyilwimi ewuthandwa kakhulu futhi ephumelelayo yokuhlela. Kulula ukuyisebenzisa, futhi abasebenzisi abaningi bewebhu bayayithanda ukuphatha imisebenzi esheshayo. Isibonelo, uma befuna ukususa uhlu, amanani, imikhiqizo, amasevisi kanye nedatha, bayayisebenzisa. Eqinisweni, i-Python inikeza abasebenzisi bayo amathuluzi anamandla ale misebenzi - samsung service centr.
Izinzuzo zokusebenzisa i-Python
Ukufeza imisebenzi yabo, abaseshi bewebhu basebenzisa incwadzi yePython, evumela ukuba baqhube amaphrojekthi ngokushesha futhi kalula. Empeleni, inikeza abasebenzisi bayo izindlela ezilula ukucinga, ukuthola nokuguqula idatha yabo eqoqwe kumafayela athile kumakhompyutha abo.
Abasebenzisi bayo bangathola kalula idatha yesikhathi sangempela abayidingayo kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene kuwo wonke iwebhu. Ngaphezu kwalokho, inikeza abasebenzisi bayo ithuba lokuhlela iphrojekthi yabo ukuthi iqhutshwe ngesikhathi esithile ngaphakathi kwusuku. Ibuye inikeze ngezinsizakalo zokuletha idatha.
Ukufunda ukukhipha imilabhu ye-Python kuwumsebenzi olula, ohlinzeka abasebenzisi bawo amathuba amangalisayo futhi aphumelelayo okukhulisa ukusebenza kwebhizinisi labo. Ngokwenza kanjalo, abasebenzisi bangaba nokuqonda okucacile ukuthi lezi zinhlaka zewebhu zisebenza kanjani. Isibonelo, kuya ku-25 (scrape) iwebhusayithi , kudingeka ukuthi bakwazi 'ukuxhumana' ngewebhu (HTTP), ngokusebenzisa Izicelo (umtapo wolwazi lwePython). Khona-ke, bangayithola yonke idatha, futhi kumele bakhiphe i-HTML (ngokusebenzisa i-lXML noma isobho elihle)
ilabhulali ye-Python ihlose ukwenza iwebhu ukususa umsebenzi olula kubasesho bewebhu. Uma yonke idatha engalungile bese uyibeka ngaphandle futhi uhlinzeke abasebenzisi bayo. It inikeza ezinye izindawo ezinkulu, ezinikeza amagama e-HTML amagama, ukwenza kube lula kakhulu kubasebenzisi. I-python uhlelo olukhulu, olwenzelwe ikakhulukazi amaphrojekthi afana ne-web scraping. Ihlinzeka ngezindlela ezithile ezilula kubasebenzisi bayo ukuguqula umuthi we-parse. Empeleni lolu hlelo lwelulwimi lwakhiwe ngaphezulu kwezingxenye ezihamba phambili zePython, njenge-lXML futhi iguquguquka kakhulu. Eqinisweni, ithola idatha ehlungiwe futhi iqoqa yonke imininingwane edingekayo ye-web scrapers kungakapheli amaminithi. Ngokuqondile, ilabhulali ye-Lxml ivumela abasebenzisi bayo ukuba benze isakhiwo somuthi ngokusebenzisa i-XPath. Ngenxa yalokho, bangakwazi ukuchaza kalula indlela eya ku-element equkethe ulwazi oluthile. Isibonelo, uma abasebenzisi befuna ukukhipha izihloko kumawebhusayithi, badinga ukuthola kuqala ukuthi yiluhlobo luni lwe-HTML oluhlala kulo bese bekhipha idatha.